आर्यघाटमा पनि विभेद
गणतन्त्र स्थापना भइसक्दा पनि शव जलाउन राजतन्त्रकालीन विभेद कायमै
विशिष्ठहरूको अन्त्येष्टि गरिने १ नम्बर चिता। तस्बिर– दिनेश गोले/शिक्षापत्र
काठमाडौं– संघीय गणतन्त्र नेपालमा राज्यका हरेक तहमा समान अधिकार तथा न्यायको नारा घन्काउन छोडिएको छैन। तर, अस्पतालमा उपचारदेखि आर्यघाटसम्म भीआइपी र सर्वसाधारणबीच विभेद कायमै छ।
अस्पतालमा मात्र होइन, आर्यघाटमा पनि शव जलाउन भीआईपीका लागि कोटा छुट्याइएको छ। भीआईपीको शव जलाउने ठाउँमा सर्वसाधारणका शव जलाउन पाइँदैन।
नियमावलीअनुसार आर्यघाटको एक नम्बर चितामा राष्ट्र प्रमुख, पूर्वराष्ट्र प्रमुख, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वराजा तथा पूर्वराजपरिवार आदिको शव मात्र जलाउन पाइन्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीको शव पनि एक नम्बर चितामा जलाउन पाउने नियम रहेको कोषका पूर्वअध्यक्ष तथा संस्कृतिविद् डा. गोविन्द टण्डन बताउँछन्।
पशुपति आर्यघाटकै महंगो २ नम्बर चिता (बायाँतर्फको शव जलिरहेको) र विशिष्ठहरूको शव मात्र जलाइने १ नम्बर चिता (दायाँ)। तस्बिर– दिनेश गोले/शिक्षापत्र
संस्कृतिविद् डा. टण्डनका अनुसार पशुपति आर्यघाटमा शव जलाउने स्थानबारे चार वर्षअघि नै यस्तो नियमावली बनाइएको रहेछ। नियमावली बनाउँदा टण्डन सदस्य सचिव थिए।
राष्ट्रिय व्यक्तित्वका नाममा जथाभावी लास जलाउँदा समस्या उत्पन्न भएपछि व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाइएको टण्डन बताउँछन्। ‘नियमावलीमा टेकेर काम गर्दा सजिलो भयो,’ उनी भन्छन्।
राजतन्त्र कालमा एक नम्बर चितामा राजपरिवारका बाहेक अरूको शव जलाउन पाइँदैनथ्यो। राणा शासन हुन्जेल दुई नम्बर चितामा पनि राणाहरूले मात्रै शव जलाउन पाउने व्यवस्था थियो। ‘राणा शासनको अन्त्यपछि दुई नम्बर चितामा शुल्क तिरेर सर्वसाधारणका शव पनि जलाउन पाइने भयो,’ टण्डन भन्छन्।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका निर्देशक तथा प्रवक्ता भोलाप्रसाद सिटौला भने आर्यघाटमा शव जलाउने नियमावलीबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्। सरकारले राष्ट्रिय सम्मान दिने व्यक्तिलाई एक नम्बर चितामा जलाइने गरेको उनी स्विकार्छन्। ‘राजा र राजपरिवारका सदस्यका शव जलाउने ठाउँमा अहिले राष्ट्रिय सम्मान पाएका व्यक्तिका शव जलाइन्छ,’ सिटौला भन्छन्।
सोमबार पशुपति आर्यघाटमा चितामा जलिरहेका शव। तस्बिर– दिनेश गोले/शिक्षापत्र
एक नम्बर चितामा जलाउने भीआईपीका लागि कुनै शुल्क लाग्दैन। दुई नम्बर चितामा भने इच्छा गर्नेले जलाउन पाइन्छ। तर, त्यसका लागि पाँच हजार शुल्क लाग्छ। वातावरण शुल्क भनेर यो शुल्क लिइन्छ। हुने–खाने र रहर गर्नेहरूले दुई नम्बर चितामा जलाउन पाउँछन्।
एक नम्बर चितामा जलाउन सर्वसाधारणलाई कुनै पहुँच छैन। दुई नम्बर चितासम्म पनि चर्को शुल्कका कारण सर्वसाधारणको पहुँच हुँदैन। त्यसबाहेकका चितामा भने सर्वसाधारणका शव जलाउन पाइन्छ। आम सर्वसाधारणका शव जलाउने चिताको शुल्क १२ सय रुपैयाँ लाग्छ। यो एक हजार वातावरण शुल्क र दुई सय शव दर्ता शुल्क हो। यसबाहेक विभिन्न सामान र सेवा शुल्क अलग्गै लाग्छ।